Yintoni i-skimmer kwaye yenzelwe ntoni? | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Amanzi olwandle
Kukho izinto ezahlukeneyo eziyimfuneko ekusebenzeni kakuhle kwe-aquarium. Inqaku ngalinye linemisebenzi yalo kwaye lizinzisa iimeko zokusingqongileyo ukuze iintlanzi ziphile kakuhle. Kule meko siza kuthetha ngayo umtyibilizi. Imalunga Iifilitha zamanzi anetyuwa. Ikwaziwa njengegama lesiSpanish elithi "urea separator" okanye "separator protein".
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba uyifaka nini i-skimmer kwaye uyisebenzisa njani? Kule posi siza kukuxelela yonke into 🙂
1 Ezona modeli zintle ze-aquarium
1.1 I-Ocean yasimahla ye-SM042 yokuKhangela umphezulu weSkimmer
1.2 IBoyu Skimmer yeAquarium
1.3 IHydor Nano Slim Skim Icwecwe ngaphakathi
1.4 Umphezulu weFluval Skimmer
2 Yintoni i-skimmer?
4 Iindidi zeSkimmer
5 Isetyenziswa njani
7 Zeziphi iinxalenye anazo umntu ohlola izinto?
8 Kuphi ukubeka i-skimmer
9 Isahluli sephrotheni umphezulu
Ezona modeli zintle ze-aquarium
Ulwandle Simahla SM042 Skimmer ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
U-Eheim 7006059 ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
I-Blau Aquaristic 7700080 ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Iprotheni yeSera Marin ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
UNICREW Skimmer... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	Ulwandle Simahla SM042 Skimmer ...
Umgangatho wexabiso	U-Eheim 7006059 ...
Oyintandokazi yethu	I-Blau Aquaristic 7700080 ...
Iprotheni yeSera Marin ...
I-Ocean yasimahla ye-SM042 yokuKhangela umphezulu weSkimmer
Ulwandle Simahla SM042 Skimmer ...
Le modeli ye-aquarium skimmer uyakwazi ukumpompa iilitha ezingama-200 zamanzi ngeyure. Ngale ndlela, unokuphinda wenze imeko yendalo efunwa yintlanzi yamanzi eetyuwa kwi-aquarium yakho. Ukongeza, amandla okumpompa ayakwazi ukushenxisa ifilimu encinci yegrisi kunye nothuli olwenzeka kumphezulu wamanzi. Ke, sikwanendawo yokuhlala emanzini kunye nokucoca kakuhle.
cofa apha ukuthenga le modeli.
IBoyu Skimmer yeAquarium
IBoyu Skimmer ye ...
Lo Skimmer Yenzelwe amatanki amanzi ukuya kwiilitha ezingama-600. Ine-valve yokukwazi ukulungelelanisa ukuhamba esifuna ukumpompa ngalo lonke ixesha. Oku kuyokwahluka ngokuxhomekeke kubungakanani beentlanzi esinazo. Iyakwazi ukupompa ukuya kwi-1400 yeelitha ngeyure ngenxa yenaliti yevili. Inekomityi ekhutshwayo yokucoca kunye nokugcina lula.
Ungacofa apha ukufumana le modeli.
IHydor Nano Slim Skim Icwecwe ngaphakathi
IHydor Nano Slim Skim ...
Ngale Skimmer uya kuba noyilo lwangoku oluhle oludibeneyo kunye nokuhombisa. Ingasetyenziselwa ukuhombisa i-aquarium ukongeza kwimisebenzi yayo ephambili. Inenkqubo yokufunxa amanzi ngaphezulu ukuze isebenze njenge skimmer. Zilingana emazantsi e-aquarium kwaye zinempawu ezithile zangoku. Inenkqubo yokusebenzisa amandla ukunciphisa ukusetyenziswa kombane. Ayenzeki nayiphi na ingxolo ngexesha lokusebenza.
Inezinto ezininzi zokuxhasa ukufakwa ngokulula kwaye ifuna ukugcinwa okuncinci. Ungacofa apha ukuthenga le modeli ngexabiso elihle.
Umphezulu weFluval Skimmer
Ngokungafaniyo nabanye le Skimmer le ndawo. Isebenza kwaye ihlengahlengisa kuzo zonke iintlobo zeefilitha zangaphandle ezinceda ukukhupha amanzi kumphezulu we-aquarium, isuse olu luhlu lweentsalela ezingathandekiyo. Inofakelo olulula kwaye ayenzi ngxolo ekusebenzeni kwayo.
Fumana enye yazo ngokunqakraza apha.
Emva kokudibana okokuqala kunye nehlabathi leendawo zasemanzini, kugqityiwe kwelokuba iimeko zendalo kufuneka ziphinde zenziwe. Kubalulekile ukuba iintlanzi zethu zizive zisekhaya ukunciphisa uxinzelelo kunye nokugcina impilo esempilweni. Esona sixhobo sisebenzayo Ukwahlula ukuhluza i-aquarium yamanzi yetyuwa zizikimu.
Esi sixhobo siyazama phinda wenze eyakho indalo kwi-aquarium. Xa sihamba ngaselunxwemeni okanye kwizibuko, sinokubona indawo apho amaza aqhekeka khona aze enze amagwebu atyheli. Le nto inye yile nto skimmer ijolise ekuyiveliseni. Ngale ndlela, iintlanzi zamanzi anetyuwa ziya kuziva ngathi ngamaza.
Kukho abakhenkethi be iimodeli ezahlukeneyo kunye neiglasi.
Xa siqala isixhobo, Amaqamza omoya angeniswa ngokuhamba kwamanzi. Iiproteni amasuntswana, izinto zokulandela umkhondo kunye nezinye izidalwa eziphilayo ezihlala ziqhotyoshelwe kula maqamza. Olu qulunqo luhlala lukhuphukela phezulu kwaye luhlala lugcinwe kwi-foam.
Ngaphakathi kwi-skimmer amaqamza ahlala egxile kwaye avumela yonke inkunkuma ukuba iqokelele kwiglasi. Ngale ndlela, i-aquarium ihlala icocekile.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeSkimmer ngokuxhomekeke kubume kunye nokusebenza kwazo. Makhe sibone ukuba zintoni:
I-skimmer edibeneyo ngoku: Yimodeli apho umoya ungeniswa khona ngezantsi kwegumbi kwaye udibana namanzi njengoko enyuka esiya kwinqanawa yokuqokelela. Bahlala basebenzisa ityhubhu yesilinda evulekileyo kunye nomthombo webhabhu kwisiseko sayo.
Ilitye lomoya: zezo zisebenza ngokudlula komoya oxinzelelweyo kwisisasazisi kwaye ke zivelise inani elikhulu lamabhamu amancinci. Lukhetho olufikelelekayo kwaye olusebenzayo. Ifuna ulondolozo oluncinci.
I-Venturi: Luhlobo lwe skimmer olusebenzisa i-venturi injector ukuze ikwazi ukuvelisa amaqamza omoya amaninzi. Kuyinyani ukuba basebenzisa impompo enamandla ngakumbi ukuze bakwazi ukusebenza ivelufa yokutyhala. Ngombulelo kwinani elikhulu lamaqamza aveliswayo, inokucoca ngokufanelekileyo amanzi e-aquarium.
Ukuhamba ngokujikeleza okujikelezayo: Ukwandisa igumbi lokuphendula, amanzi amaninzi anokuqhubekeka kwaye kususwe ubumdaka ngakumbi. Yile ndlela esebenza ngayo ukuhamba kwe-countercurrent. Apha amanzi afakwe ngaphezulu kwityhubhu yokuphendula kunye nomthombo webhola kunye nendawo ephuma emazantsi. Kukuchasene neemodeli eziqhelekileyo. Basebenzisa iifomati zomoya ezenziwe ngomthi ezineempompo zomoya ezinamandla ukuvelisa amaqamza amakhulu. Ziyilelwe ukuvelisa isixa esikhulu sogwebu.
Downdraft: Zeemodeli ezinokuqhubekeka isixa esikhulu samanzi kwaye zilungele ii-aquariums ezinkulu. Ezi skimmers zisebenza ngokujova amanzi ngoxinzelelo oluphezulu kwiityhubhu ukuze zenze amagwebu kunye namaqamza.
Beckett: Inokufana okufanayo kwi-Downdraft Skimmer kodwa ineyantlukwano kwinto esiyibonayo ngenaliti yegwebu ukuvelisa ukuhamba kwebhola lomoya.
Ukutshiza induction: Zezo zisebenzisa impompo ukusebenzisa umlomo wokutshiza kwaye zihlala zikhankanywa ziisentimitha ezimbalwa ngaphezulu kwenqanaba lamanzi. Isitshizi sinomsebenzi wokubambisa kunye nokutyumza umoya kwisiseko se-aquarium kunye nokunyukela kwigumbi lokuqokelela.
Uxinzelelo: Ezi skimmers zivumela amanzi ngaphakathi kweSkimmer ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibuyiselwe kwi-aquarium.
I-Skimmer kufuneka ibenendawo elungileyo yokusebenza kwayo ngokuchanekileyo. Nangona le ndawo ingenasigqibo. Oko kukuthi, inokubekwa naphina apho sifuna khona. Bahlala benza ingxolo eninzi kwaye uyilo lwabo aluncedisi konke konke xa kuziwa ekuphuculeni umhombiso we-aquarium. Ukuba sinendawo kunye nekhabhathi phantsi kwe-aquarium, le yeyona ndawo ifanelekileyo yekona. Ngale ndlela, siya kunciphisa ingxolo kwaye ayizukubonwa.
Isitya se-skimmer kufuneka sicocwe veki nganye ukuze sisebenze ngokufanelekileyo. Nje ukuba siwuthulule, sawubuyisela endaweni enye. Kuyacetyiswa zicoce ngokucocekileyo isikreyim kwisithuba esimalunga neenyanga ezi-4 ukuya kwezi-6. Yile ndlela esinokuphelisa ngayo zonke iintlobo zezinto eziphilayo kunye ne-algae enokuthi ikhule ngaphakathi. Azenzi mahluko phakathi kwezinto eziqokelelweyo, kungoko sinokuphela sisusa izinto ezilandelwayo eziyimfuneko kuphuhliso olufanelekileyo lwezinto eziphila emanzini. Oku kuthetha ukuba kufuneka sibongeze rhoqo.
Iindebe zokuqokelela zinoxanduva lokuba amagwebu aqokelele kwaye abe lulwelo. Oku kukhokelela kulwelo olungqindilili, notyheli. Ivumba likhumbuza umchamo kwaye ngenxa yoko alithandeki. Kwaye yile nkunkuma yentlanzi.
Ke ngoko, inxenye yescimmer efuna ukucocwa kakhulu ukuze isebenze kakuhle liglasi yokuqokelela. Kuxhomekeka kuhlobo lwe-aquarium esinayo kunye nemodeli yayo, kubalulekile oko Ukucoca kwenziwa phakathi kwe-1 kunye namaxesha ama-4 ngeveki. Ukucoca kwayo kulula. Kufuneka ichithwe kuze kufakwe enye endaweni yayo.
Ingxaki encinci enokuthi i-skimmer ivelise kukususwa kwezinto ezilandelwayo ezibangelwayo. Ezi zinto zokulandela umkhondo ziyafuneka kuphuhliso lweekorale, ukuba sifuna ukubanazo. Inesisombululo esilula: kufuneka songeze umkhondo rhoqo kwaye ngokwahlukeneyo.
Zeziphi iinxalenye anazo umntu ohlola izinto?
Kukho izikeyi ezisebenzisa iscressors somoya esinezixhobo ezahlukeneyo zomthi zokungenisa umoya. Into eqhelekileyo kukuba basebenzisa impompo yamanzi. Ezo zisebenzisa impompo yamanzi zezona zinamandla kwaye zinamandla.
Izinto ezenziwe ngazo zezi:
Umbhobho wokungena komoya
Impompo yamanzi yeyona inoxanduva lokwazisa umsinga wamanzi kuwo wonke umzimba. Ngenxa yempembelelo ye-venturi, umoya ungena ngokuthe ngcembe, uxubana namanzi. Umoya udlula kumbhobho omncinci, oguqukayo.
Isiphelo setyhubhu siphume emanzini ukwenzela ukuba xa amanzi engena kwaye eshiya i-aquarium nge-skimmer, aphume ngokuqhubekayo. Amaqamza ayakha kwaye anyukele kwiglasi yokuqokelela apho irhoxisiweyo. Ukuyicoca ngokufanelekileyo, siza kuhlala sijonga ubumdaka obufumanayo.
Iimodeli ze-skimmer zenziwe ngokungqinelana noyilo kunye nomthamo wamanzi e-aquarium. Ayifani ukuyisebenzisa kwi-aquarium ene-100 yeelitha zamanzi kunenye yeelitha ezingama-300. Iimodeli ezincinci ziphakamileyo zenyawo. Kwelinye icala, ezona mveliso zininzi kunye nokusetyenziswa koluntu kunokusebenzisa iscimmer ukuya kuthi ga kwiimitha ezininzi ukuphakama.
Kuphi ukubeka i-skimmer
Ngenxa yokusebenza kwayo, indawo ebekwe kuyo ayimiselanga kusebenza kwayo ngokuchanekileyo. Ngokubhekisele kuyilo lwayo, esi sixhobo asihlelanga ngenkangeleko, ke kungcono ufumane indawo yokuyifihla.
Indlela engabizi kakhulu yokuyifihla kukubeka indawo yokuhlala yangaphakathi ukubeka skimmer. Ngale ndlela ayizukubonisa ngakumbi. Kuxhomekeka kuhlahlo-lwabiwo mali esifuna ukulityala kunye nenqanaba lengxolo, siza kubeka isahluli se-urea kwindawo enye okanye kwenye.
Bakhalaza ikakhulu ngengxolo eveliswe ngabadlali bezemidlalo. Kuya kufuneka ucinge ukuba umsebenzi wakho yimpompo yamanzi. Ayisiyonto inokwenziwa ngaphandle kwengxolo. Ingcebiso kula matyala kukubeka i-aquarium kwindawo yendlu ephazamisa ubuncinci.
Isahluli sephrotheni umphezulu
I-aquarium hobbyists zihlala zidida Abadlali bezemidlalo. Oku akukho. Kuluhlu lwezicoci ezingenanto yakwenza nesikimer esiqhelekileyo. Ezi zixhobo zomphezulu zisetyenziselwa ukuthintela ifilimu encinci ekubunjweni kumphezulu we-aquarium.
Umaleko owenziweyo ubangela ukuba ioksijini ye-aquarium iphelele kwaye iintlanzi azinakuphila kakuhle. Ukongeza, inani lokukhanya elingenayo liyancitshiswa. Olu luhlu kulula kakhulu ukulubona. Kuya kufuneka sibeke umnwe emanzini kwaye sijonge ukuba kubonakala ngathi kukho ibala leoyile elijikelezileyo na.
Izikhuseli zomphezulu aziqokeleli ubumdaka nakweyiphi na iglasi. Kuya kufuneka ugcine into enye engqondweni. Ezi zixhobo bayayinyamalala ifilimu kumphezulu we-aquarium kodwa bangayisusi. Oko kukuthi, into abayenzayo bayayixuba kunye nomthamo wamanzi ngamaza avelisayo.
Ngokungafaniyo nesikim esiqhelekileyo, ezi zikwalungele ne-aquariums zamanzi amatsha.
Ngolu lwazi uya kuba nakho ukwazi ukuyigcina ngokufanelekileyo i-aquarium yakho ngaphandle kwengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Skimmer kwi-aquarium yakho